Kutengesa Pamhepo: Kutsvaga Yako Tarisiro Ekutenga Zvinokonzeresa | Martech Zone
Mumwe wemubvunzo unowanzoitika wandinonzwa ndewe: Iwe unoziva sei kuti ndeupi meseji wekushandisa kune yekumhara peji kana kushambadzira mushandirapamwe? Ndiwo mubvunzo wakarurama. Meseji isiriyo ichakunda dhizaini yakanaka, gwara chairo, uye kunyangwe chikuru kupa.
Mhinduro ndeyekuti, hongu, zvinoenderana nekuti tarisiro yako iripi mukutenga. Pane nhanho ina huru mune chero sarudzo yekutenga. Iwe ungaudza sei kuti yako tarisiro iripi? Iwe unofanirwa kuziva yavo kutenga zvinokonzera.
Kuti titange kupinda mune izvo zvinotenga zvinotangisa, ngatishandisei muenzaniso isu tese tinogona kuenderana ne: kutenga kumashopu.
Kudzidza nezve Kutenga Zvinokonzeresa kuMall
Zviitiko zvakanakisa zvekutenga zviri mumusika. Ivo vakango darn kugona kukushandura iwe kubva kune unodzungaira, wakarasika mweya kuenda kumutengi. Saka ngatitarisei maitiro avanoita newe uye tidzidze zvidzidzo zvishoma nezve kuziva zvinotangisa kutenga.
Funga kuti iwe unoona chitoro chausina kumbobvira wapindamo, uye womira kunze apo uchichitarisa. Zvichida iwe uri mumusika unotarisa chikwangwani uchiedza kufunga kuti ivo ndivanaani uye vanoitei. Usati watomboita sarudzo yekuita nebhizinesi iri, unenge uri kudzungaira.
Iri izwi rakasimba, asi rakanaka kutsanangura icho chikamu chekutanga chekudyidzana. Izwi iri rinoshanda kune vanhu vanongouya kuwebhusaiti yako vobva vabudazve ipapo; izwi rekuti 'high bounce rate' rinoshandiswa kutsanangura chiitiko ichi. Izvi ndizvo Vanodzungaira, kwete kana tarisiro chaiyo padanho rino. Ivo vanhu vari kungouya kuzotandara, uye saka tinotanga kutanga kukura vatengi nechikamu ichocho.
Maitiro Ekudyidzana Neanodzungaira: "Dzidza Zvimwe"
Yekutanga kushevedzera-kune-chiito mune chero nzira yekutengesa kunyangwe iyo isina kukodzera tarisiro ndeye dzidza zvimwe. Iyi yekukoka yakakosha yakagadzirirwa kuve yakaderera chikamu chekuzvipira iwe chaunogona kubvunza nezve tarisiro - ingo shandisa imwe nguva kuti uwane zvimwe.
The dzidza zvimwe kufona-ku-chiito zvakare ndeimwe yeanonyanya kushandiswa marongero epamhepo kuwana tarisiro yekupa ruzivo. Zvese zvemukati zvekushambadzira ndezve a dzidza zvimwe zano. Chero kupihwa kupihwa kwemahara kunodzidzisa tarisiro yako chimwe chinhu chavaisaziva kare ndeye dzidza zvimwe kudaidza-kuita.
izvi dzidza zvimwe kufona-ku-chiito kunogona kudhindwa zvine chekuita nechinhu iwe chauri kudzidzisa. Semuyenzaniso, CrazyEgg's webhusaiti anoti Ndiratidze Meepu Yangu Yekupisa izvo zviri kunyatso kudzidzisa tarisiro yavo chimwe chinhu chitsva chavaisaziva kare.
Iyo yekutenga inotangisa iwe yauri kutsvaga mumwe munhu ari kupindura kune yako dzidza zvimwe kudaidza-kuita. Vari kusimudza maoko avo uye vachikupa mvumo yekuenderera mberi nekuvatengesa.
Ramba uchifunga kuti yako tarisiro iri kupindura nekuti ivo vanonyatsoda kudzidza chimwe chinhu - saka usavanze zvekutengesa kumashure kwe dzidza zvimwe kudaidza-kuita. Kana iwe uchifunga kuti yako tarisiro yakagadzirira kutenga, saka vape iyo tenga izvozvi kana gadzirisa kudaidza-kune-chiito icho chakanyanya kuenderana nezvavanotarisira.
Chidzidzo: Iwe unoda chimwe chinhu yakajeka uye yakashinga kutsanangura zvauri kune a Anodada.
Ngatifungei kuti chimwe chinhu nezvechitoro chakukwezva. Iyi ndiyo poindi yaunopinda muchitoro nekuti urikungoyedza kuwana pfungwa yezviri kuitika kana zvavanotengesa.
Unoziva zvinoitika zvinotevera. Mutengesi anouya kwauri ndokubvunza kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu. Mhinduro yako ingangoita otomatiki,
Ndinoidaidza kuti a Kutarisa.
Mumwe munhu ari kutanga kuita bhizinesi rako asi asinganyatso kuziva kuti kana iwe usina kana chinhu chekutenga ari kungotarisa.
Asi ivo vari kungotarisa nekuti havasati vafungidzira parizvino kuti chii chavari kuda kana chavanoda. Iri ibasa rechitoro kuisa zvese kunze nenzira yekuti iwe uzviwane wega, nekuti pamwe hausi kuzoita zvekutengesa nemutengesi panguva ino.
A Kutarisa iri kunyatsofarira kuratidzwa kwekutanga. Zvinhu zvinonyanya kushushikana uye zvinoonekwa panguva ino. Ichi chikonzero nei chitoro chichiisa mubhedha wavo kunze nemubhedha, zvigadziko zvehusiku, uye fenicha - saka unogona kuzvifungidzira mumba mako.
Ivo havangoregedze iwo mabhedha kumusoro kumadziro uye kukuita iwe kuti uende kuburikidza nawo.
Iwewo, uchafanirwa kubatsira yako Kutarisa fungidzira hupenyu hwavo mushure mekushandisa chako chigadzirwa kana sevhisi.
Mutengesi anoita zvekare kare - uye zvakare nesimba - panguva ino anenge asiri kukura vatengi. Vachave vachivadzinga.
Asi zvinotonyanya kukosha, kunze kwekunge ivo vachikwanisa kuzvifungidzira vachifamba vachienda nechimwe chinhu muchitoro ichocho, vari kuenda nekukurumidza. Nguva yavo yakakosha uye kunze kwekunge chimwe chinhu muchitoro ichi chaita chinokanganisa, ivo vanongoenderera mberi.
Maitiro Ekuita neKutarisa: "Hupenyu Huri nani"
Uku kudaidza-kuita-chiito ndiko kunozivikanwa kwazvo paterevhizheni dzeTV. Nekuti iwe haugone kusimuka kubva pamubhedha wako uye wotenga chimwe chinhu nekukasira, mazhinji makuru mabhurandi anoedza kukuita kuti unzwe zvirinani nekutenga chigadzirwa chavo - paunopedzisira wasvika pairi.
Funga nezve ingangoita yega yega yekutengesa yawakamboona. Unozonyanya kuita zvepabonde, kuva neshamwari dzakawanda, kupfuma…. iwe tora pfungwa.
Chokwadi, iyo hupenyu huri nani iri kugadzirisa dambudziko, haisati iri imwe yawakaona izvozvi.
Zano rekushambadzira apa ndere kungotengesa chigadzirwa sekugadzira hupenyu huri nani - chero zvazvinoreva kumutengi wako akakwana. Nekudaro, iyi yekudaidzira-kune-chiito iri kutarisa kune yako akanzwa zvido, chimwe chinhu chaunoda, asi usati wataura kana kumbofunga nezvazvo. Inoshanda padanho repamoyo.
The Kutarisa inopindura zvakanyanya kune iyo hupenyu huri nani kufona-ku-chiito nekuti ivo vanoda izvo iwe zvaunoratidza - kunyangwe ivo vasina kufunga kuti vaizvida vasati vasangana newe. Iyo inzira yakakosha yekubatsira yako tarisiro kuziva kwavo zvavanoda - kunyangwe kana zvisina kutaurwa.
Usafunge kuti kudanwa-ku-chiito kunobatsira chete mukushambadzira kweTV. Izvo zvakare zvakakosha mukushambadzira kwakananga.
Kana tarisiro yako isingazive nekukasira kana kutenda kuti vane zvaunoda zvauri kugadzirisa, uchafanirwa kuratidza kuti chigadzirwa kana sevhisi yako ichagadzira sei hupenyu huri nani
Zvichienderana nekuti ungakurumidza sei kuratidza tariro yako kuti unogona kupa hupenyu huri nani, unogona kunge uine Wana Hupenyu Husina Kunetseka or Iva Neakawanda Kushandisa Mari kudaidza-kuita. Iyi ndiyo yakanangana nemutengesi yakaenzana neyekutengesa doro.
Iyo yekutenga inotangisa pano iri kupindura kune yako hupenyu huri nani kudaidza-kuita. Nokupindura izvozvo, ivo vakasimudza maoko avo uye vakaratidza kuti ivo zvechokwadi vanoda izvo zvauri kupa. Ehezve, ivo havana zano rekuti rinoshanda sei kana kuti rakawanda zvakadii; iwe uchiri kuda kuwana kodzero yekuvhara kutengesa, asi parizvino, uri munzira kwayo.
Chidzidzo: Iwe unofanirwa kupenda chiratidzo kune iyo Kutarisa nerondedzero yekuti ungakwanise sei chinja hupenyu hwavo.
Kutsvaga muMall's Store
Zvino chimbofungidzira kuti uri kutarisa muchitoro chitsva ichi uye pakarepo chinhu chinobata ziso rako.
Iwe unoona kuti icho chinhu chaungade kana chaunoda. Iyi ingave iri iyo poindi iwe paunogona kutora chimwe chinhu pasherufu, uchichiongorora.
Panguva ino urikufananidza uye kupesanisa. Iwe unotarisa pamutengo, iwe unotarisa chipepa uye iwe unotarisa zviri mukati maro.
Iye zvino wave Shopper, akanyatsobatanidzwa uye akagadzirira kuita sarudzo nezve kana ichi chiri chinhu chaunoda.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti pamberi peiyi poindi, iwe ungadai usina kunge waifarira mukukurukurirana nemutengesi. Uye iwe zvechokwadi haungafarire maficha echigadzirwa.
Chitoro chinogona kunyatso kutanga kuita ne Vanotenga nekuita kuti zvive nyore kuenzanisa zvaunoda nezvakanakira zvigadzirwa zvavo. Ita kuti zvive nyore kuverenga, nyore kuwana.
Zvirinani, ipa zvishandiso zvakagadzirirwa uye zvakagadziriswa uye masevhisi anobatanidza zvaunoda iwe nezvikomborero zvaunopa. Izvo zvakanyanya kusarudzika, zvirinani.
Kubatana naShopper: "Gadzirisa"
Tarisiro isati yagadzirira kutenga, ivo vanongoda kugadzirisa matambudziko avo - izvo, zvechokwadi, zvinogona kuvakurudzira kutenga.
The gadzirisa kufona-ku-chiito kunoitirwa kuti dambudziko rako rematambudziko ripere.
Quick Sprout ine yakanaka gadzirisa kufona-kune-chiito pane yavo peji remba.
Ivo vanoona iro dambudziko: hauna traffic yakakwana.
Unoda kuzvigadzirisa? Wobva waisaina.
The gadzirisa kufona-ku-chiito kunogona kuendesa kukutengesa, asi kazhinji kunoitangira.
Iwe uchaona mabhizinesi mazhinji achishandisa gadzirisa kufona-ku-chiito pakarepo. Izvo zvakanaka kana dambudziko rauri kuyedza kugadzirisa riri pachena zvekuti rinoda kuziviswa.
Asi kune vazhinji varidzi vebhizinesi, iro dambudziko rinogona kuve risingazivikanwe. Nguva zhinji tarisiro yedu inonzwa kurwadziwa, asi handizive kunobva kurwadziwa ikoko. Kana iwe ukazviwana iwe uchifanirwa kutsanangura izvo kune zvaunotarisira, unogona kunge uchisvetukira ku gadzirisa kudana-ku-chiito nekukurumidza.
The Shopper anoziva dambudziko rake uye anoda kuti igadziriswe. Chero mutauro unomukurudzira iye kugadzirisa dambudziko iro unokodzera.
Iyo yakasimba yekufona-ku-chiito uye inogona kazhinji kushandiswa kuona kuti itarisiro yerudzii yauinayo uye nekugona kwakanyanya kuvabatsira.
Kazhinji, gadzirisa mafoni-ku-chiito anouya mumapoka aine tarisiro yekusarudza iyo inoenderana nechavanoda. Pano, zano rekushambadzira nderekugadzirisa tarisiro nezvidimbu zvikamu kuitira kuti ugone kuzvinongedzera munzira yemhinduro chaiyo.
Iyo yekutenga inotangisa apa iri kudyidzana neako gadzirisa kudaidza-kuita. Nekudzvanya pairi, yako tarisiro yakasimudza ruoko uye yaratidza, ehe, ivo vanotoita marwadzo auri kutsanangura uye vanoda nzira yekuti iende. Zvino, inguva yekukurukura kuti unozviita sei.
chidzidzo: Unofanirwa kupa iyo zvinobatsira zvechigadzirwa chako kana sevhisi nenzira inoenderana nekudiwa kweako Shopper - izvo chete chokwadi panguva ino, asi pasina nguva.
Unoda rubatsiro nehurukuro yekutengesa iyo inofanirwa kutevera iyo gadzirisa kudaidzira-kuita? Dhawunirodha iyi yemahara High-Tiketi Yekutengesa Script uye zadza zvisipo kuti uvhare zvimwe zvepamusoro-tikiti sevhisi zvibvumirano:
Dhawunirodha iyo Yakakwira-Tiketi Yekutengesa Script
Takananga kuCash Register
Kana iyo sarudzo iri yakanaka, yako tarisiro inofamba kubva pakuva mushopper kuenda pakuve a mutengi.
Mutengi mumwe munhu akagadzirira kutenga.
Apa ndipo panotengeswa vanoparadzanisa vanokunda kubva kune vanenge vakundwa. Iwe unonzwa sei muchitoro kana wagadzirira kutenga asi iwe usingakwanise kuwana rejista yemari? Kana zvakatonyanya, iwe unozviwana, asi hapana mumwe ipapo wekukubatsira iwe?
Wati wambobuda kunze kwechitoro nekuti waisakwanisa kutenga zvawaida kutenga?
Vatengesi vanoita kuti zvive pachena kuti vawane marejista emari vanoita zvakanaka. Pamwe zviri munzvimbo iri pachena kana kuti iwe unenge uchiperekedzwa nemutengesi uyo anokuendesa iwe pachako.
Chero chimwe chinhu kukundikana kwechiitiko. Iwe haugone kukura vatengi kana vasingakwanise kutenga kubva kwauri.
Izvi zvinogona kuve pachena kana iwe uine ecommerce saiti. Asi dzimwe nguva zvigadzirwa zvedu kana masevhisi anoda matanho mashoma ekuvhara chibvumirano.
Kana zvirizvo, usa "vanze marejista emari." Ita shuwa yako tarisiro inoziva maitiro ekuve mutengi.
Kubatana neMutengi: "Tenga Izvozvi"
Iyo yakanyanya kunanga uye yakajairwa kufona-ku-chiito ndeye iyo inotarisira tarisiro yekurova chikwama chavo: tenga izvozvi!
Iwe unogona kuona tenga izvozvi kudhindisa nzira dzakasiyana munzvimbo dzakasiyana dzechigadzirwa. Pane e-commerce katarogu, iko kudaidzira kuita kunogona kutanga kungoti "Wedzera kuCart." Asi zvakanyanya, tiri kukumbira tarisiro yekutenga chinhu chavari kuwedzera kungoro yavo.
Dzimwe nguva, tenga izvozvi inogona kudomwa maererano nezvechigadzirwa iwe chauri kutsvaga kutenga. Zvakadai sekuva nhengo kana kuvaka chirongwa changu. Rudzi urwu rwemazwi rwakanyanya kukosha uye rwakananga kumamiriro ezvinhu uye runogona kusimudza mhinduro nekuita chikumbiro.
dzimwe nguva tenga izvozvi haibatanidze mari, asi pachinzvimbo inoda tarisiro yekutanga nechigadzirwa mahara. Iyi misiyano yakajairika pakati pe "freemium" mabhizimusi mamodheru, zvigadzirwa zvine nguva yemahara yekuyedza, kana garandi yekudzosera mari.
Muzviitiko zvese izvi, iyo tenga izvozvi kufona-ku-chiito kunoendeswa kune tarisiro yakagadzirira kuita.
Zvichienderana nezvako chigadzirwa kana sevhisi, izvi zvinogona kutora nguva kuti ugadzirire. Panyaya ye e-commerce, kazhinji mushandisi anogona kubva Anodada to mutengi nekukurumidza, saka Wedzera yekutengera uye Purchase Cart zvine musoro.
Asi dzimwe nguva, iwe unofanirwa kuvaka kuvimba netariro yako uye a tenga izvozvi kufona-ku-chiito pane iko kwekutanga kusangana kwakanyanya, nekukurumidza.
Panzvimbo iyoyo, gadzira zano rekushambadzira iro rinovaka anovimba kutanga, uye wozokanda ne tenga izvozvi kufona-ku-chiito mushure mekunge tarisiro yaratidza kuti vafamba nemumatanho ese ekutenga.
Chikonzero chekutenga pano ndicho chekupedzisira pane zvese zvinotenga zvinotangisa; kudzvanya iyo tenga izvozvi bhatani. Ehezve, sekuziva kwako, rako basa harina kuitwa. Iwe unofanirwa kuve neakachena, akajeka maitiro ekutengeserana, kubata chero ekupedzisira kuramba, uye kuzadzikisa nenzira inoita kuti zvive nyore kuita bhizinesi newe.
Mazhinji mabhizinesi akakuvara neiyo chaiyo "mitsara mirefu pacountout counter" - kunyangwe kana iwe usina chitoro chaicho.
chidzidzo: Unofanira kutsanangura maitiro ekutengesa bhizinesi vako mutengi; iva akajeka nezvekuti ungatenga sei chigadzirwa chako uye chiite nemazvo.
Kubatanidza Kwese Kudana-Kudana-ku-Kuita Kuona Kutenga Zvinokanganisa
Imwe neimwe yekudaidzira-kuita-chiito inoda kushandiswa nevateereri vanokodzera. Isu tiri kuvaka kuvimbika uye kuvimbika - zvishoma nezvishoma - neese kutaurirana kana chidimbu chemukati. Iwe unofanirwa kuenzanisa zvirimo nekufona-ku-kuita.
Zvakangoipa kungoita yekufona-ku-chiito kukurumidza mukuita sezvazviri kubvumira tarisiro yako kudzoseresa paside.
Usakurudzire mutengi wako kutenga uyezve uteedzere ne Dzidza zvimwe kudaidza-kuita.
Iyi nzira yekubva Anodada kuburikidza Kutarisa, kuti Shopper, kuti mutengi ndizvo zvandinodaidza kutama. Iko kugona kwetarisiro yekusarudza kuita nebhizinesi padanho rakadzika uye rakadzama kudzamara vasarudza kuve mutengi.
Mune imwe nzira, iwe hausi kukura vatengi - vari kuzvivandudza ivo pachavo. Zvese iwe zvaunogona kuita kuvapa izvo zvavanoda - chaizvo pavanenge vachizvida - uye nekuona chiratidzo chekutama - izvo zvinotenga zvinotangisa - munguva iyo zvinoitika.
Sezvo iwe paunodzidza kushandisa yega yega ye4 yekufona-ku-kuita nevateereri chaivo, iwe uchaona kuti iwe unotungamira yako tarisiro kuburikidza neyakaitwa nzira yekutengesa mushe mushe uye ine yakanyanya kuvimba.
Tags: Wedzera kungorotenga izvozvimaitiro emutengikudana kuzviitocrazyegge-zvokutengeseranaecommercekudzungairamutarisirivatarisirikutengesa onlinekutengesa pamhepoinokurumidza kumerashoppershopper kumutengi
Maitiro Ekutanga Ekurovera Kwavo Kuvhura paChigadzirwa Hunt